UHAYLEY KIYOKO ON 'AMANTOMBAZANA ANJENGAMANTOMBAZANA' KUNYE NEQUEERNESS EJEM NAKWIIHOLOGRAMS - HAYLEY KIYOKO
Iyamangalisa Indoda Yesigcawu
UHayley Kiyoko ngokuGcina uQeqesho kwiJem nakwiHolograms Movie
UHayley Kiyoko, oza kudlala isiginkci esikhokelayo uAja Leith kumdlalo ozayo Jem kunye neeHolograms movie, uxoxe ngomculo wakhe kunye Ubungqongqo kwifilimu kwi udliwanondlebe no-After Ellen.
UKiyoko, okwangumbhali weengoma zemvumi, waqondisa kunye nokukhupha ividiyo yengoma yakhe ethi Amantombazana Njengamantombazana kwiveki ephelileyo. Ividiyo yomculo iyamlingisa Jem intombazana uStefanie Scott (oza kudlala ikhibhodi kunye nombhali weengoma uKimber Benton) njengentombazana ethandana nomhlobo wakhe obhinqileyo onobudlelwane.
U-Kiyoko uthe ngelixa enovalo malunga nomsebenzi wakhe wokuqala wokubamba, wayefuna ukuba ividiyo ibemnandi kwaye ibe nomyalezo.
Ndayibhala le ngoma kancinane kwisithuba esingaphezulu konyaka ophelileyo kwaye yayiqala ngqa kwindawo elula kakhulu. Zininzi iingoma ezithetha ngabafana abeba amantombazana abanye abafana nayo yonke loo nto ke ndicinge ukuba ingayingoma emnandi ngokwenene apho intombazana ibiba enye intombi yomnye umfana. Ndiyithande nje loo mbono yokuzithemba ndivakalelwa ngathi ayikho ngokwenene ngaphandle.
Ekwenziweni kwenkwenkwezi yakhe, uKiyoko uthe yayiyiprojekthi enomyalezo ababenemincili bobabini.
Kulungile uStefanie Scott ndinembali ethile kwaye siza kuza Jem kunye neeHolograms sikunye, ngoko ke singabahlobo abalungileyo ngenene. Kwaye bendimxelela malunga nonyango kunye nevidiyo kwaye indlela endonwabe ngayo malunga nombono kwaye wayewuthanda umbono kunye nomxholo webali kwaye wazinikela ukuyenza. Uye wathi, Ndifuna ukuyenza nyani. Oku kuhle kakhulu! Yiloo ndlela ke eyaqala ngayo. Ndikwangabahlobo abalungileyo ngenene noKelsey Chow noHayden Thompson ke bonke abadlali babengabahlobo bam abalungileyo. Nokuba bonke abadlali kunye nabasebenzi babenomdla ngenene malunga nentshukumo kunye neprojekthi. Wonke umntu uyayithanda ingoma kunye nomyalezo wayo.
iarhente yomrhwebi yobudala be dragon
Xa ebuzwa malunga nolwamkelo oluvela kuluntu lwe-LGBTQ +, uKiyoko uthe uyathemba ukuba ividiyo, njenge-monologue yangaphakathi yomnqweno kaScott wokuzithemba, yayinyanisekile. Ngalo lonke uchulumanco malunga nokulingana komtshato kunye nokuthanda okuhlangeneyo malunga nomyalezo osemva kwevidiyo, umbuzo wokuba ingaba Uburharha kwindawo Jem qhula / ikhathuni Ukuqhubela kwifilimu kufanelekile. Xa ubuzwa malunga nokuba siza kubona ubugorha kwi Umboniso bhanyabhanya, uKiyoko uphendule ngokuqinisekileyo, ukuba akunjalo.
Umm .... andazi, ndiyaqikelela? Ndiva ngathi kukho fanbase enkulu Jem kunye neeHolograms . Baninzi kakhulu abadlali abamangalisayo kuyo kunye nokubengezela kunye nobukhazikhazi kunye nefashoni. Ndivakalelwa kukuba abantu baya konwaba kwaye bayonwabele. Ayisiyonyani kwakhona, isekwe kwikhathuni kodwa ibekwe kwinkulungwane yama-21. Ndicinga ukuba abantu bazokuyithanda nyani.
Nangona khange sonwabe kakhulu ngale filimu, ngethemba lokuba izakwenza kakuhle ngoKimber noStormer.
(nge Emva koEllen )
-Ndicela uqaphele umgaqo-nkqubo kaMary Sue wokuphawula ngokubanzi.
Kukho ubungqina bobuNzululwazi bokuba kufuneka utye iPopcorn kwiiMuvi
Iithiyetha Zemiboniso Bhanyabhanya
Ixesha le-Adventure's 'Genderswapped Universe lifumana eyayo iiComic Series nguNatasha Allegri!
Ukuma kweRazzies kutyholwa ngokuba yiRigig, kungqina ukuba akukho nto eHollywood ingcwele
Zeziphi kwezi Zinja ziShushu eziPhezulu onokuzitya?
Izinto Esizibonileyo Namhlanje: UDonald Trump Ulibale ukuba UnguMongameli wee-Virgin Islands zase-US
Zonke Iziseko Zakho Zezethu
Indawo Ethe Cwaka
Ezo zambatho zeHalloween zazingachanekanga, iiTurkey ezintsha zeNinja ziJongeka ziLungile
Abantu Abazizimumu Ukuthengisa: Sisaphulukana noko
UMegan Fox vs Michael Bay: Umda wexesha
Inani labemi basemantla e-hemisphere vs emazantsi
I-garfunkel kunye ne-oates louis ck
"kara" ngephupha eliqinisekileyo
Amehlo am ajonge ugoogle feud
unonkala omdaka kunye neqokobhe lelego